Hunhu Kudzora kweOganiki Fertilizers
Mamiriro ekudzora kwe kugadzirwa kwe organic fetiraiza, mukuita, kudyidzana kwezvinhu zvepanyama uye zvehupenyu mukuita kwekugadzira manyowa. Kune rimwe divi, mamiriro ekudzora anopindirana uye akabatanidzwa. Kune rimwe divi, mhepo dzakasiyana dzemhepo dzakasanganiswa pamwechete, nekuda kweakasiyana muchimiro uye akasiyana kudzikisira velocity.
Mhute chinhu chakakosha chinodiwa manyowa. Mukuita mupfudze wemanyowa, hunyoro hwehukama hwezvinhu zvekutanga zvekuisa manyowa ndezve 40% kusvika 70%, zvinova zvinoona kufambira mberi kwakanaka kwemanyowa. Unyoro hwakanyatsokodzera ndeye 60-70%. Yakanyanya kukwirira kana yakaderera zvakanyanya hunyoro hwehunhu hunogona kukanganisa chiitiko cheaerobe kuitira kuti mwando murau uitwe pamberi pekuvira. Kana hunyoro hwezvinhu huri pasi pe60%, iyo tembiricha iri kukwira zvishoma nezvishoma uye iyo yekuora degree iri yakaderera. Kana hunyoro hwacho hwapfuura 70%, kufefetedza mhepo kunotadziswa uye kuvirisa anaerobic kunozoumbwa, izvo zvisingaitise kufambira mberi kwese.
Zvidzidzo zvakaratidza kuti nemazvo kuwedzera hunyoro hwezvinhu zvakasvibirira zvinogona kukurumidza kukura kompositi kukura uye kugadzikana. Mhute inofanira kuramba iri pa50-60% mudanho rekutanga remanyowa uyezve inofanira kuchengetwa pa40% kusvika 50%. Mhute inofanirwa kudzorwa pazasi pe30% mushure mekuisa kompositi. Kana hunyoro hwakakwira, hunofanirwa kunge huchiomeswa panopisa 80 ℃.
Iwo mhedzisiro yehutachiona chiitiko, iyo inotarisisa kudyidzana kwezvinhu. Kana yekutanga tembiricha yekuisa manyowa iri 30 ~ 50 ℃, thermophilic microorganisms inogona kudzikisira huwandu hwakawanda hwezvinhu zvakasikwa uye kuora cellulose nekukurumidza munguva pfupi, nekudaro ichisimudzira kuwedzera kwetembiricha yemurwi. The optimum tembiricha iri 55 ~ 60 ℃. Kupisa kwakanyanya chiitiko chakakosha kuuraya utachiona, mazai ezvipembenene, mbeu yemasora uye zvimwe zvinhu zvine chepfu uye zvinokuvadza. Pane 55 ℃, 65 ℃ uye 70 temperatures tembiricha yakakwira kwemaawa mashoma inogona kuuraya zvinhu zvinokuvadza. Kazhinji zvinotora vhiki mbiri kana nhatu pakudziya kwakajairika.
Takataura kuti hunyoro chinhu chinokanganisa kupisa kwetompositi. Kunyanyisa hunyoro kunodzikisa tembiricha yemanyowa, uye kugadzirisa hunyoro kunobatsira pakukwirisa kwekushisa mune inotevera nhanho yekuvira. Iyo tembiricha inogona zvakare kudzikiswa nekuwedzera humwe hunyoro.
Kutendeuka pamusoro pemurwi ndeimwe nzira yekudzora tembiricha. Nekutendeuka pamusoro pemurwi, tembiricha yemurwi wezvinhu inogona kunyatso kudzorwa, uye kubuda kwemvura uye chiyero chemhepo- kuyerera kunogona kukurumidza. Iyocompost Turner muchina inzira inoshanda yekuona kuvirisa kwenguva pfupi. Iine hunhu hwekushanda kuri nyore, mutengo unodhura uye kugona kwakanyanya. The compost Turner muchina inogona kunyatso kudzora tembiricha uye nguva yekuvira.
C / N chiyero kudzora.
Yakakodzera C / N chiyero inogona kusimudzira iyo isingaite kuvirisa. Kana huwandu hweC / N hwakanyanya kukwirira, nekuda kwekushayikwa kweitrogen uye kukamurwa kwenzvimbo iri kukura, kudzikira kwehuwandu hwezvinhu zvakasikwa kunodzikira, zvichiita kuti kompositi iteme kwenguva refu. Kana iyo C / N reshiyo yakanyanya kuderera, iyo kabhoni inogona kushandiswa zvizere, uye iyo yakawandisa nitrogen inogona kurasikirwa seammonia. Kwete chete iyo inokanganisa nharaunda, asi zvakare inoderedza kushanda kweiyo nitrogen fetiraiza. Microorganisms inogadzira microbial protoplasm panguva yekuvira kwehupenyu. Protoplasm ine 50% kabhoni, 5% nitrogen uye 0.25% phosphoric acid. Vatsvagiri vanopa chiyero chakakodzera cheC / N chiri 20-30%.
Iyo C / N chiyero chemanyowa manyowa inogona kugadziriswa nekuwedzera yakakwira C kana yakakwira N zvinhu. Zvimwe zvinhu, senge mashanga, masora, matavi nemashizha, zvine fiber, lignin uye pectin. Nekuda kwayo yakakwira kabhoni / nitrogen zvemukati, inogona kushandiswa seyakawedzera kabhoni yekuwedzera. Mufudze wezvipfuyo nehuku wakakura mu nitrogen uye unogona kushandiswa seyakawedzera nitrogen yekuwedzera. Semuenzaniso, iyo yekushandisa mwero weammonia nitrogen mune yenguruve mupfudze kusvika kuma microorganisms i80%, iyo inogona kunyatso kusimudzira kukura uye kubereka kwehutachiona uye mhanyisa kompositi.
Iyo nyowani yemuchina fetiraiza granulation muchina yakakodzera danho iri. Zvekuwedzera zvinogona kuwedzerwa kune zvakasiyana zvinodiwa kana mbishi zvinhu zvapinda mumushini.
Air-yerera uye oxygen.
Zve kuviriswa kwemanyowa, zvakakosha kuva nemhepo yakakwana uye oxygen. Basa rayo guru ndere kupa okisijeni inodiwa mukukura kwemajemikari. Iyo yakanyanya tembiricha uye nguva yekuisa manyowa inogona kudzorwa nekugadzirisa tembiricha yemurwi kuburikidza nekuyerera kwemhepo kuyerera. Kuwedzera kuyerera kwemhepo kunogona kubvisa hunyoro apo uchichengetedza yakakwana tembiricha mamiriro. Kufefetedza kwakaringana uye okisijeni kunogona kudzikisa kurasikirwa kweitrogen uye kunhuhwirira kwechizvarwa kubva mumanyowa.
Hunyoro hwemanyowa efotereza zvine chekuita nekukwanisa kwemhepo, kuita kwehutachiona uye kushandiswa kweoksijeni. Ndicho chinhu chakakosha cheaerobic composting. Isu tinofanirwa kudzora hunyoro uye kufefetedza zvinoenderana nehunhu hwezvinhu kuti tibudirire kuwirirana kwehunyoro uye oxygen. Panguva imwecheteyo, ese ari maviri anogona kusimudzira kukura uye kubereka kwehutachiona uye kugadzirisa mamiriro ekuvira.
Zvidzidzo zvakaratidza kuti zvinoratidza kuti iyo oxygen inoshandiswa inowedzera zvakanyanya pasi pe60 ℃, inokura zvishoma nezvishoma pamusoro pe60 ℃, uye iri padyo ne zero pamusoro pe70 ℃. Kufefetedza uye oxygen zvinofanirwa kugadziriswa zvinoenderana netembiricha dzakasiyana.
Iyo pH kukosha inokanganisa iyo yese yekuvira maitiro. Muchikamu chekutanga chekugadzira manyowa, pH inokanganisa mashandiro ebhakitiriya. Semuenzaniso, pH = 6.0 ndiyo yakakosha poindi mupfudze wenguruve nehuswa. Iyo inodzivisa carbon dioxide uye kupisa kupisa paPH <6.0. Pa pH> 6.0, yayo carbon dioxide uye kupisa kunowedzera nekukurumidza. Muchikamu chekupisa chakanyanya, kusanganiswa kwepH yepamusoro uye kupisa kwakanyanya kunokonzera ammonia volatilization. Mishonga inowora kuita organic acids kuburikidza nemumvumbi, iyo inoderedza iyo pH kutenderedza 5.0. Mhando dzakasarudzika dzemakemikari acids dzinobuda semhepo inotonhora painokwira. Panguva imwecheteyo, kudengenyeka kweammonia ne organic organic kunowedzera pH kukosha. Pakupedzisira, inogadzikana padanho repamusoro. Huwandu hwenzvimbo yekuisa manyowa hunogona kuwanikwa patembiricha yakakwira yepamusoro ine huwandu hwePH kubva pa7.5 kusvika ku8.5. Iyo pH yepamusoro inogona zvakare kukonzera yakawandisa ammonia volatilization, saka iyo pH inogona kudzikiswa nekuwedzera alum uye phosphoric acid.
Muchidimbu, hazvisi nyore kudzora zvinobudirira uye zvakakwana kuvirisa kwezvinhu zvakasikwa. Kwechinhu chimwe chete, izvi zviri nyore. Zvisinei, zvinhu zvakasiyana zvinopindirana uye zvinotitadzisa. Kuti uzive kuwanda kwekugadzirisa mamiriro e composting, zvinodikanwa kuti ubatirane neese maitiro. Kana mamiriro ekudzora akakodzera, iko kuvirisa kunogona kuenderera mushe, nekudaro nekuisa hwaro hwekugadzirwa kwemhando yepamusoro fetiraiza.